News Collection: भट्टराईलाई कारबाही गर्न दाहालको प्रस्ताव
भट्टराईलाई कारबाही गर्न दाहालको प्रस्ताव
किरण पुन, काठमाडौं, पुस १४- उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी पद्धति र निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति राखेको आरोपमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनीमाथि अनुशासन कारबाहीको प्रस्ताव ल्याएका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबारयता जारी स्थायी समिति बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रधान विषयलाई पन्छाएर बैठकलाई विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले भने दाहालको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ। 'भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको प्रस्ताव आएको छ,' एक स्थायी समिति सदस्यले भने। पार्टी पद्धतिविपरीत बोल्नु गल्ती भए पनि यसलाई ठूलो मुद्दा बनाइएकोमा वैद्य र भट्टराई समूहका नेताले आपत्ति जनाएका छन्।
'बाहिर भन्नु उहाँको गल्ती हो, त्यो एउटा पाटो हुन सक्छ। तर उहाँले मात्र संचारमाध्यममा बोल्नुभएको छ र? अरूले पनि बोलेका छन्,' स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दलाई उद्धृत गर्दै अर्का सदस्यले भने, 'फरक यत्ति हो, भट्टराईले आफैं बोल्नुभयो, अरूले स्रोत भनेर सूचना दिइरहेका छन्।'
अघिल्लो साता एक दैनिकमा प्रकाशित भट्टराईको अन्तर्वार्ता र त्यसअघिपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनको अभिव्यक्तिको फेहरिस्त तयार गरी दाहालले कारबाही प्रस्ताव गरेका हुन्। भट्टराईले जनविद्रोह गर्ने पार्टी निर्णयमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि अहिले शान्ति र संविधानलाई जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएको प्रति दाहालले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
पुस २ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा भट्टराईले संविधान बन्ने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै जनविद्रोहमा जाने पार्टी निर्णयविपरीत 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए। फरक मत लेख्ने आफ्नो निर्णय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेको बारे दाहाल उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निचोडमा पुगेका हुन्।
स्थायी समिति सदस्य चन्दले महŒवपूर्ण विषय थाती राखेर भट्टराईको विषय उछालिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। चन्दलाई उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने, 'सांगठनिक संचरना, जिम्मेवारी हेरफेर, प्रशिक्षणलगायत विषयमा छलफल गर्नु छ। यी विषयलाई थाती राखेर किन स्पष्टीकरणलाई उछाल्न खोजिएको छ, मैले बुझेको छैन।'
अर्का स्थायी समिति सदस्यले पनि पार्टी अध्यक्षले गलत प्रस्ताव ल्याएको बताए। बोलेकै भरमा सजाय हुने भए भट्टराईमात्र होइन, सबै नेतालाई कारबाही हुनुपर्ने उनले जनाए। 'कमीकमजोरी भए नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर यो व्यक्तिपरक हुनुह"दैन, अध्यक्षदेखि तलका कार्यकर्तासम्म लागू हुनुपर्छ,' ती सदस्यले भने, 'बाहिर बोल्नेलाई मात्र होइन, काम नगर्ने, खुराफाती, ठेक्कापट्टा गर्ने, काममा नखट्ने, गुट बनाउनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। '
अध्यक्ष पक्षधर नेताले भने भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। भट्टराई समूहका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेललगायतले अध्यक्ष प्रस्तावमा समर्थन जनाउ"दै अविलम्ब कारबाही माग गरेका थिए।
केन्द्रीय समितिको २ गतेको बैठकले पार्टीभित्रका असहमति बहसका रूपमा विचारधारा नामक पत्रिकामार्फत मात्र बहस चलाउने निर्णयविपरीत भट्टराईले पत्रिकाबाजी गरेको भन्दै कारबाही प्रस्ताव ल्याइएको छ।
पार्टीका कुरा बाहिर ल्याउने भट्टराईको बानीको आलोचना भएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दाहाल पक्षधर एक नेताले भने, 'पार्टी निर्णय एकातिर छ, अर्कोतिर घरी मेरो संगठनमा यस्तो छ, उस्तो छ भनेर आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दा पार्टीलाई क्षति पुगेकाले कारबाही प्रस्ताव आएको हो।'
उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराई पक्षधरले विधि, प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले नै यस्तो समस्या आएको तर्क गरेका थिए। उनीहरूले विधि र प्रक्रियाबारे छलफल गर्न सकिने तर यसैलाई लिएर कारबाही अघि बढाउन नहुने जिकीर गरेका थिए। केन्द्रीय समितिले प्रचारप्रसारमा जाने विधि र प्रक्रिया बनाउने जिम्मा स्थायी समिति र पोलिटब्युरोलाई दिएको छ।
स्रोतअनुसार पार्टी निर्णयविपरीत बाहिर आएको विषयले दाहाल आक्रोशित छन्। अध्यक्ष दाहाल मुख्य विषयलाई पन्छाएर किन भट्टराईको पछि लागेका छन् भन्नेबारे वैद्य समूह सशंकित छ।
जनयुद्धकालमा रुकुमको लाबाङ बैठकबाट अध्यक्ष दाहालले वैद्य समूहको साथ लिएर भट्टराईसहित नेतालाई कारबाही गरेका थिए। चुनवाङ बैठकयता भट्टराईलाई साथ लिएर वैद्य समूहलाई अध्यक्षले पेलेको वैद्य समूहको आरोप छ। वैद्यलाई उपयोग गर्दै भट्टराई समूहलाई पाखा लाउने र भट्टराईलाई उपयोग गर्दै वैद्यलाई किनारा लगाउने काम अध्यक्षले गर्दै आएको भन्दै दुवै समूहले विरोध गरिरहेका छन्। वैद्य र भट्टराई समूहले आफूहरुलाई 'उपयोग' होइन 'दुरुपयोग' गर्दै एकअर्काविरुद्ध लडाएको अध्यक्षमाथि आरोप लगाएका छन्।
वैद्य समूहका एक नेताले भने, 'हिजो बाबुरामलाई साथ लिएर हामीलाई ङ्याक्ने, आज हामीलाई साथ लिएर बाबुरामलाई ठोक्ने अध्यक्षको कूटनीति हामीले बुझिसकेका छौं। हामी किन प्रयोग हुने?'
वैद्य समूहले भट्टराई प्रकरण उछालेर जनविद्रोहमा नजाने अध्यक्षको चालबाजीको रूपमा समेत अर्थ्याएको छ। भट्टराई कारबाहीमा परे मध्यम वर्गको साथ नपाइने हुँदा विद्रोह तुहाउने षड्यन्त्रको रूपमा उनीहरूले विश्लेषण गरेका छन्।
'बाबुराम नआए विद्रोह हुँदैन। अनि मैले त विद्रोह चाहेकै थिएँ, भएन भनेर विषयान्तर गर्र्न पनि कारबाहीलाई यसरी उछाल्न खोजेका त होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ,' वैद्य समूहका एक नेताले भने। पार्टी नेताको जिम्मेवारी हेरफेर, १६ गतेदेखि सुरु हुने आन्तरिक प्रशिक्षणमा जाने नेताको चयनलगायत बैठकका एजेन्डा छन्। दुई दिनयता जारी बैठक भने भट्टराईकै विषयमा मात्र केन्द्रित छ। स्रोतले बुधबार पनि यसै विषयमा बैठक लम्ब्याउने पक्षमा अध्यक्ष दाहाल रहेको जानकारी दिएको छ।